Petra, obodo okwute (IIIa) | Akụkọ Njem
Anyị rutere na nke atọ nke nleta anyị na Petra ebe anyị ga-ama gastronomy ọ bụghị naanị ebe a kamakwa na ọkwa mba. Nri Jọdan na-agwakọta nri dị mfe mana dị ụtọ nke ukwuu ebe ọ bụla n'ime efere ọdịnala nke gastronomy a ga-abụ ememme ezigbo ekpomeekpo n'ọnụ anyị.
Nri mba dị iche na nke anyị nwere ike ịchọta na mba ndị dị nso dị ka Syria ma ọ bụ Lebanon, ọ bụ ezie na mba ọ bụla nwere ụzọ ha si esi nri. Ekwesiri iburu n'uche na okpukpe na-emetụtakwa nri nke mba a, yabụ na anyị agaghị ahụ nri esi mmanya ma ọ bụ anụ ezi esi nri n'etiti mgbochi ndị ọzọ.
Nri Jọdan dị iche iche
Nri mba Jọdan bụ mansaf ma gosiputa ihe Musakhan na malouba. Ndị ọzọ tremendously omenala efere bụ kebab, ndụmọdụ, felafel ma ọ bụ hummus n'etiti ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ azụ, na Aqaba anyị ga-ahụ ọtụtụ ụdị azụ dị iche iche.
Nri nke mba a jikọtara mkpo nri, akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi na anụ, ihe a na-atụ aro maka ndị ọbịa, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ flavors ndị ọdịda anyanwụ amaghị na gastronomy a. Otu ihe ga-adọrọ uche anyị bụ na mgbe ọ bụla anyị risịrị nri ọ bụla enwere desktọọpụ nwere ezigbo desserts na-eso mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi ọhụrụ.
A efere nke hummus
Omenala ihe ọ drinkụ drinkụ bụ mmanya, ihe ọ aụ liụ na-esi ísì ụtọ nke na-atọ ụtọ nke anise, ọ bụ ezie na na Jọdan, anyị nwekwara ike ịchọta ihe ọ drinksụ drinksụ na-enye ume ọhụrụ, biya na mmanya nke owuwe ihe ubi ya, nke ọ bụ ezie na ọ bụghị oke oke, dị mma nke ọma.
Anyị na-ekwusi ike na ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị na nri ndị Arab, na họtel ị nwere ike iri nri ndị ọdịda anyanwụ ka ọ bụrụ ihe ọzọ, yabụ na mbụ, nsogbu ekwesịghị ịdị na ebe a.
Anyị ga-ezumike obere oge na ọkwa na-esote anyị ga-aga n'ihu ịmụtakwu banyere nri ndị Jọdan bara ụba na sara mbara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Petra, obodo nke nkume (IIIa)